Gay-mahadomelina more | Apg29
Ny fanadihadiana dia mampiseho fa misy impito mety hanao firaisana mampiasa zava-mahadomelina.
4000 olona dia notsapaina ny vehivavy miray amin'ny vehivavy sy ny Gay Foundation (LGF) ao amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Oniversiten'i Lancashire Afovoany tany Angletera, manoratra Daily Mail.
Canabis sy ny poppers dia ampiasaina indrindra. Popper ampiasaina amin'ny lava-pitombenana, ary mba hanatsarana levitra.
Tena fahita Avy eo, kôkainina, safononoky ny fahafinaretana, ketamine sy amphetamines.
Ny mponina mpampiasa mihena ny zava-mahadomelina amin'ny taona. Anisan'ireo pelaka sy bisexual Mampiasa efa ho taona maro tao amin'ny sokajy 36 ny 40 zava-mahadomelina ao amin'ny tanora vanim-potoana.
Mivavaha ho an'ny pelaka sy bisexual namana fa mibebaka, hanaiky an'i Jesosy ary ho voavonjy sy afaka.